Ukunakekela ukugwema intshebe elukhuni | Amadoda aSitayela
Ungayigwema kanjani intshebe eluma
I-Las intshebe ende futhi ubukhulu buya ngokuya buba semfashinini phakathi kwamadoda, kepha noma zibukeka zizinhle kakhulu futhi zinikeza ukuthinteka okungenakuphikiswa kobungqabavu ekubukekeni komuntu siqu, kufanele futhi sazi enye yezinkinga zabo ezinkulu, intshebe enukayo.
Kunzima kakhulu ukungalunywa ku intshebe ende, kepha ukunciphisa le nkinga, nazi izeluleko ongazisebenzisa lapho unakekela intshebe yakho, ukuyenza ikhule ibe bushelelezi futhi ngaphandle kokwenza ukulunywa.
Okokuqala, kufanele ukhumbule ukuthi, njengezinwele, intshebe emaphakathi naphakathi nayo idinga ukuwashwa nokunakekelwa okukhethekile, futhi ukunqanda ngokukhethekile ukulunywa, kungcono ukwenza lokhu ngosizo lwe-baby shampoo. Sebenzisa le mikhiqizo imizuzu embalwa, bese ugeza intshebe yakho ngamanzi afudumele.
Ungasebenzisa futhi ama-conditioner ezinwele ukukhuthaza ukukhula okubushelelezi kobuso bobuso, ngaphandle kokubangela ukulunywa ngenkathi kwenziwa.
Esinye isizathu esidala ukulunywa umswakama oqoqeka entshebeni, ngenxa yalesi sizathu, ngemuva kokuyigeza noma ukuyimanzisa nganoma yisiphi isizathu, kungcono ukuyomisa ngangokunokwenzeka ukugwema umswakama. Ungasebenzisa ngisho nokomisa izinwele.
Ikakhulu kulezo intshebe endeLapho izinwele ziminyene ndawonye, ​​kuyimbangela ejwayelekile kakhulu yokulunywa, ngakho-ke ungakama intshebe yakho ngekama elihle ukuxazulula le nkinga.
Ekugcineni, ama-moisturizers angaba ithuluzi elihle lokwenza ubushelelezi bezinwele zobuso kanye ne-hydration yesikhumba.
Imininingwane engaphezulu - Intshebe yezinsuku ezintathu njengengxenye yokubukeka kwakho
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Kugundiwe » Ungayigwema kanjani intshebe eluma
Ugqoka kanjani ngokuya ngohlobo lomzimba wakho